Global Voices teny Malagasy » An-tsary: Mandatsa-bato ho an’ny hoaviny vaovao ny Shiliana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Mey 2021 4:59 GMT 1	 · Mpanoratra Francisco Osorio Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Shily, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Saripika
16 May 2021, Santiago, Shily, sary nalain'ny mpanoratra ary nahazoana alalana.
Tamin'ny 15 sy 16 Mey 2021, nifidy izay ho solontenan'ny vahoaka hanoratra indray ny lalàm-panorenana any Shily sy hanampy ny firenena hiala amin'ny rafitra politika teo aloha novolavolain'ny fitondrana jadona nandritra ny ampolo taonany lasa ny Shiliana. Nifidy governora, ben'ny tanàna ary mpikambana ao amin'ny mpanolo-tsain'ny tanàna izay hiara-hiasa amin'ny ben'ny tanàna ihany koa ny olom-pirenena. Ary sambany teo amin'ny tantara no nifidy ny solontenan'ny kolontsain'izy ireo ny Shiliana indizeny mba hanampy amin'ny fanoratana indray ny lalàm-panorenana.
Zava-baovao ny fifidianana satria nahavita niatrika krizy politika  i Shily tamin'ny alàlan'ny dingana demokratika. Tamin'ny taona 2019, nanetsika ny firenena ny fihetsiketsehana ka niteraka ny firodanan'ny rafitra politika. Tamin'ny voalohany, nanao fihetsiketsehana nanohitra ny fidangan'ny saran'ny fitaterana ny Shiliana, saingy lehibe kokoa noho izany ny tsy fahafaham-po: tsy afa-po tamin'ny sehatra maro teo amin'ny fiarahamonina Shiliana ny vahoaka. Nitombo ny tatitra momba ny herisetra ataon'ny polisy .
Nanolo-kevitra ny manampahefana ao Shily taorian'ny tsy fitoniana nandritra ny efatra herinandro hikarakara fitsapankevibahoaka hanovana ny lalàm-panorenana. Ny hanova ny lalàna mba hanome toerana hipoiran'ny rafitra politika vaovao no tanjona. Ny lalàm-panorenana vaovao nosoratan'ny olom-pirenena tsotra no nibahan-toerana tamin'ny valin'ny fitsapankevibahoaka, natao tamin'ny 20 Oktobra 2020. Ny lalàm-panorenana ankehitriny, nolaniana tamin'ny taona 1980 dia nosoratana nandritra ny fitondrana jadona tany Shily tamin'ny andron'i Augusto Pinochet, vanim-potoana nisian'ny herisetra ara-politika sy ny fanjavonan'olona maro . Raha tsorina, mariky ny fanombohana vaovao amin'ny fomba fitantanana ny lalàm-panorenana vaovao.
Araka ny fanadihadiana  nataon'ny Oniversiten'i Shily, ireo mpanao fihetsiketsehana, izay vao haingana no hifidy dia manantena hahazo fanabeazana, fitsaboana, fisotroan-dronono tsara kokoa, ary fitoviana kokoa eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny tontolo iainana maharitra, ary ny fandraisan'indizeny anjara amin'ny politika.
Koa nanao dingana hafa tamin'ny fomba demokratika ny Shiliana tamin'ny fifidianana ireo izay hanova ny lalampanorenan'i Shily tamin'ny tapaky ny volana Mey 2021. Toa tsy hita intsony ireo sary mahery setra tamin'ny taona 2019 satria hamaritra ny hoavin'izy ireo ny endrika vaovaon'ireo Shiliana mizotra mankany amin'ny toeram-pifidianana, araka ny naseho tamin'ny sary nosafidiana tany amin'ny biraom-pifidianana tao Santiago de Chile, ny Alahady 16 Mey, nalain'ny mpanoratra.
Noho ny Covid-19, napetraka ny fenitra ara-pahasalamana. Misy olona iray maka ny maripan'ny olona mpifidy ary manisy tsiranoka fanadiovana ny tanana alohan'ny hamelana azy ireo hiditra ao amin'ny biraom-pifidianana. Manao arovavaorona avokoa ny olona rehetra.
Ny alahady 16 may, nisy ny filaharana kely, niezaka nitazona ny elanelana.
Ato amin'ity biraom-pifidianana ity, miandry eo alohan'ny laharan'ny efitra voatondro ho azy ireo ny mpifidy. Ny tompon'andraikitra amin'ny fifidianana avy eo no manamarina aloha raha manaja ny elanelana tsara ny ao anatin'ny biraom-pifidianana alohan'ny hiantsoana ny mpifidy hiditra. Nomanina ho an'izay mila izany tampoka ny seza.
Nilamina tanteraka ny tao anaty biraom-pifidianana, nisy ny filaharana indraindray. Nangina ny ankamaroan'ny olona, ​​niandry tamim-paharetana ny hifidy ary nody. 43 isan-jato ny taham-pahavitrihana, izay ambany kokoa noho ny nantenaina . Tsy nampoizina tanteraka ihany koa ny valim-pifidianana. Tsy nahomby ny faminavinana sy ny fanadihadiana rehetra nataon'ny fampitam-baovao. Noheverin'izy ireo fa hivoaka ho mpandresy ireo kandidà avy amin'ny elatra havanana sy afovoany havia. Tsy izany anefa no nitranga.
Nampametram-panontaniana tokoa ny fandraisana anjaran'ny tanora. Hatreto dia mbola tsy nisy angona ofisialy, saingy nanamarika  ny mpandalina fa ambany ny taham-pandraisan'anjara.
Teo ambany fifehezan'ny miaramila ny biraom-pifidianana rehetra. Efa fomba fiasa mahazatra any Shily izany. Tsy nisy fikorontanana.
Mizara fotokevitra politika telo araka ny fomban-drazana ny tontolo politika any Shily: ankavia, afovoany ary havanana. Nanolotra kandidà ireo antoko nentim-paharazana anefa mahaleo tena ny 60 isan-jaton'ny kandidà, araka ny fanadihadiana iray . Ankehitriny, ireo mahaleo tena manana seza miisa 65 (40 isan-jato) no hery politika lehibe , manaraka azy ny antoko elatra ankavia, ny elatra afovoany ankavia ary ny elatra havanana. Izany hoe, tsy nifidy antoko politika hanoratra ny lalàm-panorenana izay efa nitondra an'i Shiliy nandritra ny am-polo taonany maro ny vahoaka.
Hatreto, mbola tsy fantatra raha nitodika tany amin'ny elatra ankavia ny firenena iray manontolo – hanambara izany bebe kokoa ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana Novambra 2021. Amin'ny ankapobeny, ho lohalaharana amin'ny lalam-panorenana ny olona mahaleo tena kokoa, tanora, vehivavy, indizeny ary olona liam-pandrosoana.
Hatramin'ny nisian'ny valan'aretina, ny bisikileta no fitaterana be mpakafy any Santiago.
Tanora manao arovavaorona hafa kely.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/31/152778/
 krizy politika: https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%932021_Chilean_protests
 herisetra ataon'ny polisy: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50459961
 manampahefana : https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf
 nolaniana tamin'ny taona 1980 : https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar_(Chile)
 nisian'ny herisetra ara-politika sy ny fanjavonan'olona maro: https://www.usip.org/sites/default/files/resources/collections/truth_commissions/Chile90-Report/Chile90-Report.pdf
 ambany kokoa noho ny nantenaina: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/elecciones-chile-2021-la-participacion-en-los-historicos-comicios-de-chile-apenas-supero-el-43-nueva-constitucion-sebastian-pinera-servel-resultados-de-las-elecciones-en-chile-noticia/
 fanadihadiana iray: https://www.pauta.cl/politica/candidatos-independientes-no-militantes-convencion-constitucional-cambio
 hery politika lehibe: https://www.dw.com/es/renovaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-en-chile-m%C3%A1s-independientes-j%C3%B3venes-mujeres-ind%C3%ADgenas-y-progresistas/a-57561505